Qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. - khaliilberberawi's blog
Qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Qarax Miino islamarkaana aad u xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay Koofurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa maanta Qarax aad u xoogan uu ka dhacay nawaaxiga hoyga uu ka degenyahay magaaladaasi Madaxweynaha maamulka Galmudug Korneel Maxamed Axmed Caalin.
Qaraxa oo ahaa nuuca dhulka lagu aaso lagana hago Rumuudka Kontaroolka ayaa waxaa dhawaqiisa laga maqlay guud ahaan xaafadaha Koofureed ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inkastoo aan la ogeyn qasaaraha uu geystay.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu sababay bur burka Guri aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay hase ahaatee xiriiro kala duwan oo aan la sameynay Mas'uuliyiinta xarunta Madaxtooyada ee Maamulka Galmudug iyo waliba Madaxweynaha Maamulka Galmudug Korneel Maxamed Axmed Caalin si aan wax badan uga ogaano qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaysan inoo suuro galin in qaadka taleefoonka ku helno.
Markii uu qaraxu dhacay kadib ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in ay halkaasi ay soo gaareen Ciidamada ilaalada Madaxweynaha Maamulka Galmudug kuwaasi oo la sheegay in ay fureen rasaas aad u xoogan taasi oo aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay.
Si kastaba ha ahaatee Ma ahan markii ugu horaysay oo qarax ceenkan oo kale ah uu ka dhaco magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
# Posted on Tuesday, 12 January 2010 at 11:29 AM